ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနား ဒေါ်ပု (၁၉၀၆ - ၁၉၈၂) - Islamic Religious Affairs Council
You are here: Home အထုပ္ပတ္တိ ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနား ဒေါ်ပု (၁၉၀၆ - ၁၉၈၂)
ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနား ဒေါ်ပု (၁၉၀၆ - ၁၉၈၂)
Published: 03 January 2016 | Written by ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သန်းဝင်း | Hits: 1258
လူမှုထူးချွန်ပထမအဆင့်ကို ပထမဆုံးရရှိသူ အမျိုးသမီး
ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနား ဒေါ်ပု
မန္တလေးတိုင်း၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ယင်းတော်ရွာဇာတိ ဖြစ်သည်။ အဖ ပွဲစားကြီးဦးဘမြ အမိ ဒေါ်ခင်စီတို့မှ သက္ကရာဇ် ၁၂၆၈ (၁၉၀၆ ) ခုနှစ်တွင် ဖွားမြင်သည်။ ငယ်နာမည် မရွှေပု ဖြစ်သည်။ ၁၂၈၈ ခုနှစ်တွင် စိန်ရွှေကုန်သည် ဦးစံလှနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။ ပျဉ်းမနားသို့ ရွှေ့ပြောင်း၍ စိန်ရွှေရတနာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် လုပ်ငန်းဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ပုသည် စိန်ရွှေရတနာ လုပ်ငန်း၌ကျွမ်းကျင်သည်။ ရတနာများကိုမြင်လျှင် အရည်အသွေးအဆင့်အတန်းကို ချက်ချင်းမှန်ကန်တိကျစွာ အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သည် ဦးစံလှ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ပျဉ်းမနား မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအနောက်ဘက်တန်း ၌ ထွန်းနေရောင် ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်သည် ။ ၁၉၆၁ မှ ၁၉၆၈ ခုနှစ်အထိ ဘုရင်မ နိုင်လွန်ဇာ နှင့် အထည်စက်ရုံ တစ်ရုံ တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ။ ဒေါ်ပုသည်၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဟဂ်ျပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ယင်းတော်ရွာ အစ္စလာမ့်ရှေ့ဆောင်ကျောင်း ကလေးရိပ်သာများအတွက် ငွေကျပ်(၈)သိန်းကျော် လှူဒါန်းသည်။ ထို့အပြင် ဗလီဝတ်ကျောင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ဇီဝကလမ်း (ဇဖရ်ရှားလမ်း)ဇဖရ်ရှားဒရ်ဂါဝတ်ကျောင်းတော် နှင့် အမျိုးသမီး ၀တ်ပြုဆောင် ကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့သိမ်ဖြူလမ်းရှိ မွတ်စလင်အမျိုးသမီးရိပ်သာနှင့် ကျောင်းဆောင်အတွက် လိုအပ်သော မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများကိုလည်းကောင်း ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ စိတ်ရောဂါအထူးကု ဆေးရုံဝင်းအတွင်း ငွေခြောက်သိန်းတန် ဘွဲ့လွန်စိတ်ပညာသင်တန်းခန်းမနှင့် စာကြည့်တိုက်အတွက်လည်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလာ ၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဝင်းအတွင်း ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါအထူးကုဌာန အတွက် သိန်းသုံးဆယ်ကျော်လှူဒါန်းကာ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားစာကို ဖော်ပြပါမည်။
လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ကုသနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သိန်း(၃၀)ကျော် အကုန်အကျခံကာ ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဆေးအထူးကုဌာန အဆောက်အဦးကို ပြည်သူလူထုကိုယ်စား ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီးထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းမည့် အခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်၌ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တိုးချဲ့ဆေးရုံဝင်းအတွင်းတွင် သိန်း(၂၀)တန် အထွေထွေ အရေပြားနှင့် ကာလသားရောဂါကုဌာန အဆောက်အအုံကိုပန္နရိုက်အုတ်မြစ်ချ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၁၉၈၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်လည်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးအတွင်း၌ သိန်း ၅၀ တန် လေးထပ်တိုက် အရေပြားရောဂါနှင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောရောဂါကု ဆေးရုံ အဆောက်အအုံ အတွက်လည်း သိန်း ၂၀ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဒေါ်ပုသည် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်အသင်း၏ နာယကကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများအသင်းတွင် အမှုဆောင်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ နိုင်ငံခြားသို့ စီးပွားရေးမစ်ရှင်စေလွှတ်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ကျင်းပသည့် အစ္စလာမ်မစ်ဒအ်ဝတ်ညီလာခံသို့ ဆရာချယ်၊ သီရိပျံချီ ဃာဇီ မုဟမ္မဒ် ဟာရှင်တို့နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဟာဂျီမဒေါ်ပုသည် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် နာယက၊ အီးဒ်ဆွလာသ်ဗဟိုကော်မတီ နာယက၊ ဟစ်ဂျရီ ၁၅ ရာစု ကြိုဆိုရေး ဗဟိုကော်မတီ (အ-ဟ-က)နာယကအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။ ။
ဟာဂျီမဒေါ်ပုနှင့် ဆရာချယ်တို့ ၂ . ၅ . ၁၉၈၁ တွင်မုတ္တမမြို့ရေးစုရပ်ရှိ မြို့မဗလီကြီးဝန်းအတွင်း
ဟာဂျီမ ဒေါ်ပုမှ အမျိုးသမီးဝတ်ပြုဆောင်ဖွင့်ပွဲတွင် အမှာစကားပြောကြားနေပုံ
အမျိုးသမီးဝတ်ပြုဆောင်ဖွင့်ပွဲမှ ဟာဂျီမဒေါ်ပု ဗလီကြီးဥက္ကဌ အဗ္ဖဒလ်မာလစ်နှင့် ဆရာချယ် နိုင်ငံဂုဏ်ရည်ပထမအဆင့်
ကန်တော်ကလေး ကဘရ်စတာန် (မွတ်စလင်မ်သုဿန်) ရှိ ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနားဒေါ်ပု၏ ကဘရ် (မြှုပ်နှံထားရာနေရာ)